Konke odinga ukukwazi ngama-Skywatcher telescopes | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezibonakude eziningi zokubuka isibhakabhaka ebusuku. Izinhlobo ezithile kuphela zabaqalayo ezingasinika ithuba lokubona lobu buhle. Enye yalezo zibonakude ezibiza ukuthenga yizo zemodeli I-SkyWatcher. Inhloso enkulu yalezi zibonakude ukuba nekhwalithi esezingeni eliphakeme nokuthi zisentengo ephansi ngeyawo wonke umuntu. Umkhiqizo weSkyWatcher unemikhiqizo enhlobonhlobo yanoma ngubani oqala umhlaba wezinkanyezi noma kulabo abafuna kakhulu futhi bathuthukile abanolwazi oluningi emkhakheni.
Kule ndatshana sizokutshela zonke izici ze-SkyWatcher telescopes futhi sizokwenza ukuqhathanisa ukuze ufunde kabanzi ngale mikhiqizo.
1 Umsuka nezimpawu ezisemqoka zezibonakude zeSkyWatcher
2 AmaTeleskopu wokuthengisa ama-Skywatcher ahamba phambili
Umsuka nezimpawu ezisemqoka zezibonakude zeSkyWatcher
Umsunguli wezibonakude iSkyWatcher ubizwa ngoDavid Shen futhi njengoba wayeneminyaka engama-26 ubudala waqala ukusebenza njengongoti esikhungweni sokucwaninga. Yilapho-ke aba nentshisekelo khona ekubukekeni kwezinkanyezi nokwakhiwa kokubonakalayo. Izibonakude esikhathini esedlule zazibiza kakhulu kunanamuhla. Inhloso yanamuhla ukuthi abantu abaningi bakwazi ukubona ngale kwesibhakabhaka sethu sasebusuku. Obunye bobuhle obuthakazelisa kakhulu kumele ukucabanga ngezindandatho ze Saturn. Ngo-1999 uSynta wethule umkhiqizo wakwaSkyWatcher kUkwenza konke okusemandleni ukuthuthukisa ikhwalithi yezibonakude nokunciphisa izindleko zokukhiqiza. Ngale ndlela, kuzoba nenani elincintisanayo ezimakethe ngomkhiqizo kanye nomklamo ophakeme kakhulu kubo bonke abalandeli baleli zwe.
I-SkyWatcher telescopes yezinkanyezi inekhwalithi enhle kakhulu nentengo engabizi kakhulu. Lokhu kuyenze yaba ngomunye wemikhiqizo ebaluleke kakhulu emhlabeni jikelele. Inokunikezwa okubanzi okuhlukahlukene futhi okuhlukahlukene, ikakhulukazi okukhethekile kuma-telescopes asezingeni eliphakathi nendawo, avumela umsebenzisi ukuthi ajabulele ukubuka isibhakabhaka, noma ngabe uyimfundamakhwela, ophakathi noma othuthukile.
Kubantu abaningi, ISkyWatcher wuhlobo lwezibonakude nezesekeli njengekhwalithi engcono kakhulu. Sizohlaziya amanye amamodeli athengisa kakhulu ngezici zawo nentengo.
AmaTeleskopu wokuthengisa ama-Skywatcher ahamba phambili
Kuluhlu lwamamodeli akhiwe ngezibonakude ezincane ukuze zikwazi ukuzibeka etafuleni. Baphinde bakhonze ukubayisa noma yikuphi ukuze babe nokuhamba okungcono. Phakathi kwezimpawu zayo eziyinhloko futhi, ngokugqame kakhulu, amanani ayo aphansi nokusingathwa kalula. Lesi isibonakude esifanelekile sabaqalayo. Zinomklamo okhangayo, wesimanjemanje nesisindo esanele ukuze zikwazi ukuhambisa kalula.
Yize zingabizi kahle, zinencazelo enhle yesithombe. Uma ufuna ukuba nesibonakude ukuze ukwazi ukuthuthukisa izithombe zenyanga namanye amaplanethi, i-Heritage 90 ingenye yezindlela ezingcono kakhulu kulolu chungechunge. Kuyasebenza futhi ukukwazi ukubonwa phansi phansi. Inobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu obusivumela ukuthi sihambise mathupha isibonakude kunoma iyiphi i-eksisi ngaphandle kokuchazwa. Lokhu kusinika induduzo enkulu lapho siyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, inememori yangaphakathi enezinto ezingaphezu kuka-42.000 ukwazi ukuzibona ngokuzenzekelayo. Uma ufuna ikhophi yalolu chungechunge, ungayithenga ngokuchofoza lapha.
Kungolunye ulayini wezibonakude owaziwa nangokuthi iMercury, ilungele labo abafuna ukuqala kulokhu kubhekwa kwezinkanyezi. Kuyinto elula ukuyisebenzisa kepha uqinisekisiwe ngokuhlangenwe nakho okuhle. Intaba yayo ilungele ukubonwa komhlaba futhi inokukhulisa okuhle kwamadivayisi, yize kungeyona ehamba phambili emakethe. Ilungele abaqalayo. Kunezinhlobo ezi-3 zezibonakude ezahlukahlukene ngokuya ngenhloso esiyifunayo. Eyokuqala yiSkyWatcher mercury 607 enobubanzi belensi obungu-60mm nobude obuyi-700mm. Lesi ngesinye sezibonakude eziyisisekelo, ngakho-ke siyasiza kulabo abafuna ukuqala kulo mhlaba. Ukuqala kulo mhlaba ungathenga lesi sibonakude ngokuchofoza lapha.
Bese kuba khona imodeli elandelayo ebizwa nge-mercury 707 lapho sithola khona intaba i-altazimuth. Bonke abantu abathola le telescope baqinisekisa ukuthi inekhwalithi eyanele ukuthi bakwazi ukuqala kulo mhlaba ngoba ayidingi ukulungiswa okuningi. Baphinde bathi kunjini yabo yokusesha akuyona engcono kakhulu, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi kuhlolwe ukuthi sesivele siphakathi noma sesithuthukile. Uma ufuna ukuthenga lesi sibonakude, chofoza lapha.
Eyokugcina yiSkyWatcher mercury 705. Kuyinto ehamba phambili ngokuya ngekhwalithi nentengo yalokhu okushiwo ngenhla, kepha lokho kweminye imikhawulo njengoba kungokwethwasa. Ungathenga le modeli ngokuchofoza lapha.
Leli gumbi lezinsimbi zomkhathi linekhwalithi efanelekile kubo bonke labo bantu asebenolwazi oluthile lwangaphambilini kusayensi yezinkanyezi. Ikhwalithi yesithombe sayo iphakeme impela futhi ingahlinzeka ngemininingwane ethokozisayo ezintweni esingazibona kuyo yonke i- uhlelo lwelanga. Inembobo enkulu esivumela ukuthi sibheke amaplanethi, ama-nebulae nomthala ngendlela emnandi impela.
Sigcizelela isibonakude esihlola i-Refractor 130mm esinezinto ezisezingeni eliphakeme kanye ne-tripod enentaba ye-equatorial nesibuko sokufanisa. Lokhu kwenzelwa ukugwema ukuphazamiseka okuyindilinga. Ngokuvula okukhulu abanakho, singabona amaplanethi ngisho nasezindaweni lapho sinokungcola okuningi kokukhanya. Kuyisibonakude esithandekayo uma kubhekwa intengo yaso. Uma ufuna ukuthenga le modeli, chofoza lapha.
Inketho esezingeni eliphakeme kakhulu evela kulo mkhiqizo yi-SkyWatcher Explorer 200p / 1000 EQ5. Kuyimodeli enokuvula okungama-200mm nentaba esebenza ukukwazi ukulandela izinto zezinkanyezi ngendlela elula. Lokhu kuyenza ibe yisibonakude esifanele ukuthatha izinyathelo zokuqala kulo mhlaba. Singathola izithombe ezinhle zesikhala sangaphandle ngentengo engabizi kakhulu. chofoza lapha ukuthola eyodwa yazo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi nalokhu kuqhathanisa unganquma ukuhlukanisa ukuthi isiphi isibonakude seSkywatcher ofuna ukuba naso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Izibonakude zeSkywatcher
UJESU LAZCANO V. kusho
NGINGU-114X1000MM SKY-WATCHER TELESCOPE. I-ES EQ1 T "BINAR" BRAND KANYE ANGIKWAZI UKUTHOLA KAKHULU INCWADANA YAKHO NOMA AMANethiwekhi.
Phendula UJESU LAZCANO V.